Naoty, hevitra ary tanjon'ny mpividy | Martech Zone
Naoty, hevitra ary tanjon'ny mpividy
Alakamisy, May 5, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa, nahafinaritra ahy ny nihaona sy niresaka Jeff Quipp an'ny Search Engine People, orinasa SEO sy Internet Marketing. Jeff dia nanitsy ny tontonana momba ny naoty, hevitra ary haino aman-jery sosialy izay nisy ahy tao Search Expo Marketing Expo sy eMetrics Conference any Toronto amin'ny Gil Reich, VP fitantanana ny vokatra ao amin'ny Answers.com.
Jeff dia nitondra fanalahidy iray - ny tanjon'ny mpitsidika, zavatra ezahantsika ho fantatra hatrany rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay hanatsara ny tranonkalany ho an'ny fikarohana sy ny fanovana. Nampisaraka an'i Jeff ireo fizarana roa heverina ary maimay mpividy ary niresaka momba ny fiantraikan'ny naoty sy ny fanamarihana. Nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fitondran-tena mividy ny tsikera ratsy. Niresaka momba ny fanadihadiana nataon'ny Jeff Lightspeed tamin'ny taona 2011 i Jeff:
62% ny mpanjifa mamaky hevitra eto amin'ny Internet alohan'ny fividianana.
62% -n'ny mpanjifa nanaovana fanadihadiana natokisana hafa hevitry ny mpanjifa.
58% amin'ireo mpanjifa no nanadihady hevitra matoky avy amin'ny olona nahalala.
21% -n'ny mpanjifa nohadihadiana no nilaza fa 2 no tsikera ratsy niova ny sain'izy ireo.
37% -n'ny mpanjifa nohadihadiana no nilaza fa 3 no tsikera ratsy niova ny sain'izy ireo.
Ny 7% -n'ny mpanjifa ihany no nitodika tany amin'ny tambajotran-tseraserany mba hojerena, ny ambiny kosa nitodika tany amin'ny tranokala fampitahana fiantsenana ary fikarohana.
Azonao atao ny mieritreritra ny naoty sy ny hevitra ho toy ny pejy misy kintana vitsivitsy sy valiny tsy fantatra anarana avy amin'ny mpampiasa… saingy nanohitra ny mpanatrika i Jeff mba hieritreritra mihoatra an'izany:
Youtube rohy, ankafizinao ary fanehoan-kevitra misy fiantraikany amin'ny filaharana video.
Ny asa eo an-toerana dia miteraka motera fikarohana (Bing, Google) manana hevitra mifandraika. Ny isan'ny tsikera, ny fitadiavana ary ny fahita matetika an'ireo fanamarihana dia mety hisy fiatraikany amin'ny taha-tsindry Ny motera fikarohana dia mahazo isa naoty ihany koa amin'ireo tranonkala fanamarihana avy amin'ny olon-kafa toa an'i Yelp.
Ny endri-pikarohana natokana ho an'i Google dia ahafahanao manala tranokala amin'ny valin'ny fikarohana. Hisy fiatraikany amin'ny laharan'ny tranonkala ve izany raha maro ny olona no miakatra ambany? Mety.
Ny fanisana sy ny fanamarihana dia tsy faharavana sy alahelo ho an'ireo orinasa izay miatrika valiny ratsy eto amin'ny Internet. 33% amin'ireo nahazo valiny tamin'ny orinasa iray noho ny fijerena ratsy nandefa hevitra tsara. 34% no nanala ny famerenany ratsy azy ireo!
Ny famelabelaran-kevitr'i Jeff dia feno - miresaka amin'ny fampiasana finday ary koa ny dingana nataon'i Google hampidirina mivantana ny valin'ny media sosialy amin'ny valin'ny fikarohana. Ny lesona ao amin'ireo statistika ireo, mazava ho azy, dia ny miantoka fa miasa hampiroborobo ny orinasan-tserasera ianao. Angataho ny mpanjifanao hanome tsikera sy hanoro azy ireo ny fomba fandefasana azy ireo. Valio sy araraoty ny olana izay nahatonga ny fijerena ratsy mba hahafahanao mamadika ireo toe-javatra ireo.
Ny tsy fahampian'ny hevitra sy ny famerenana ratsy dia mety hampiodina ny mpividy ho avy. Jereo any ankoatry ny tranokalanao ary araho ny lazanao amin'ny naoty sy ny tranonkala hijerena. Hisy fiatraikany amin'ny fitondran-tena mividy izany.
Tags: 2011valiny.comfikasan'ny mpividygil reichjeff quipphevitra momba ny jironaotynaoty sy hevitrahevitra
Douglas Karr Thursday, May 5, 2011 Sunday, October 4, 2015
Fifaneraserana amin'ny sonia ny mailakao amin'ny WiseStamp
Tsy misy fitaovana mety…
May 6, 2011 amin'ny 2: 44 AM
Vao tsy ela aho no nahazo mailaka avy amin'ny orinasako fanamboarana fiara ampiasaiko. Orinasa kely sy toerana tokana izay vao nanomboka nampiasa marketing amin'ny Internet. Manolotra tapakila $ 10 ho an'ny fanamboarana ho avy izy ireo raha toa ka mandefa fanadihadihana momba ny asa fanompoana vao haingana miaraka amin'izy ireo aho. Tonga ara-potoana ny tolotra, tonga latsaky ny herinandro taorian'ny fitsidihan'ny serivisy. Tolotra tokana ihany io, ary nieritreritra fomba tsara hitondrana ahy ho any amin'ny tranonkalany aho.